Ngwa dị mkpa iji laghachi n'ụlọ akwụkwọ | Akụkọ akụrụngwa
Ma ọ masịrị anyị ma ọ bụ na ọ masịghị anyị, oge ọkọchị na-amalite ịkwụsị ma na ya maka ọtụtụ ịkpọghachi ụlọ akwụkwọ na-amalite. Nloghachi a nwere ike ịbụ maka anyị na onye mbụ ma ọ bụrụ na ị ka na-agụ akwụkwọ, ọ bụrụ na ị bụ onye nkuzi ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere mmekọrịta ụfọdụ na ụwa agụmakwụkwọ ma ọ bụ maka ụmụ gị, bụ ndị mgbe oge ọkọchị jupụtara na igwu mmiri na ọdọ mmiri ma mee ụlọ ájá n'ụsọ osimiri, lee ka esi atụta akwụkwọ dị nso ịbata.
Nkà na ụzụ na ọganihu ya na-aga n'ihu kwere ka nlọghachi a n'ụlọ akwụkwọ bụrụ obere ihe siri ike na ekele maka mbadamba, batrị ndị ọzọ ma ọ bụ Stylus ndụ nwata akwụkwọ ma ọ bụ onye nkuzi ọ bụla adịla mfe.
Ya mere na inwere ike ịmalite ịkwado maka ịlaghachi ụlọ akwụkwọ, anyị agaghị enyere gị aka ịzụta akwụkwọ akwụkwọ, mana anyị chọrọ inye gị aka site n'ịkụziri gị nke a ndepụta ngwaọrụ dị mkpa maka ịlaghachi mahadum, ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ. N'ezie, tupu ịmalite ịzụta ha niile, n'ihi na ị ga-achọ ịzụta ha niile, chee echiche nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ha, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị ga-eji ha n'oge afọ akwụkwọ ọzọ.
1 Mbadamba ụrọ, ibe gị zuru oke
2 Ikuku kiiboodu maka ngwa ngwa edetu ihe
3 Stylus ma ọ bụ ikike iji freehand ndetu
4 Bank Bank, maka na ị maghị oge ole batrị gị ga-agwụ
5 Azụ akpa iji buru ngwaọrụ na akwụkwọ gị niile
Mbadamba ụrọ, ibe gị zuru oke
na mbadamba Ha agbanweela nke ukwuu n'oge na - adịbeghị anya ma taa anyị nwere ike ị nwetaworị otu n'ime ngwaọrụ ndị a nwere ihuenyo dabara maka mkpa anyị yana ọkachasị site na ibu ibu nke anyị agaghị achọpụta na akpa anyị. O nwekwara ike ịbụ na ụdị ngwaọrụ ọ bụla anyị zụrụ dị mfe karịa akwụkwọ ọ bụla anyị ga-ebu kwa ụbọchị.
Otu mbadamba nwere ike ịbụ ezigbo onye ọrụ anyị ebe ọ bụ na anyị nwere ike nwere akwụkwọ anyị niile na nhazi dijitalụ, detuo ihe, jụọ ozi banyere ụdị dị iche iche ma mee ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị maraworị.
N'okpuru ebe anyị na-enye gị nhọrọ ịzụta mbadamba 3 site na Amazon nke nwere ike bụrụ nke zuru oke maka gị yana iji nweta nnukwu ojiji n'ime ha n'afọ agụmakwụkwọ na-esote:
iPad Obere 2 maka euro 288.95
Sony Xperia Mbadamba Z4 maka euro 642
BQ Edison 3 maka euro 199
Ikuku kiiboodu maka ngwa ngwa edetu ihe
Ọ bụrụ na ị nwere mbadamba nkume ma ọ bụ na-eche echiche ịzụta ya, a wireless keyboard ọ nwere ike ịbụ obere ihe dị mkpa na bụ na ihe atụ na-ndetu ọ gaghị ekwe omume ime ya site na ihuenyo mmetụ ihuenyo.
Nkwado anyị bụ na ọ bụrụ na ị ga-ewere mbadamba nkume na klaasị afọ a, buru ụzọ nweta igodo ikuku ma ọ bụ na ị gaghị enwe ike iji ya mee ihe. Lee, anyá »‹ na-egosi gá »‹ 3 dá »‹ iche iche na-akpali nhá »rá» nke wireless keyboards ugbu a na-ere na Amazon:
Ugboro abụọ i25 maka euro 15,99
Logitech K400 maka euro 24,99
Stylus ma ọ bụ ikike iji freehand ndetu
Ọ bụrụ na anyị ga-ewere mbadamba nkume na klaasị, yana eriri ikuku, Anyi enweghi ike inwe Stylus iji were nweta ihe ederede ma ọ bụ ọbụna inwe ike ise ma ọ bụ ime ihe ndepụta n'ụzọ ka zie ezie.
Enwere ọtụtụ ngwaọrụ nke ụdị a n'ahịa ma anyị nwere ike ịzụta ihe dị oke ọnụ ala n'ụlọ ahịa ndị Eshia dị n'okpuru ụlọ anyị ma ọ bụ dabere n'akụkụ ihe dị elu dị ka nke egosiri n'okpuru:
Wacom achara Stylus fineline maka euro 38,81
AmazonBasics Executive maka euro 7,99
Bank Bank, maka na ị maghị oge ole batrị gị ga-agwụ
Ọ bụrụ na anyị ejiri ọtụtụ ngwaọrụ ga-ebo anyị na klaasị, ọ kacha mma ka anyị kpachara anya ma ghara ịhapụ ụlọ na-enweghị otu batrị dị na mpụga ma ọ bụ ụlọ akụ nke ahụ nwere ike ime ka anyị rute na njedebe nke ụbọchị yana, dịka ọmụmaatụ, mbadamba ma ọ bụ ekwentị anyị.
Na ahịa taa enwere ọtụtụ narị batrị dị na mpụga dị, nke ọ bụla nwere ike ya yana ọnụahịa dị iche iche dị iche iche. Anyị chọrọ ịhọrọ abụọ n'ime narị otu narị ndị nọ n'ahịa ma ị nwere ike ịzụta ha site na Amazon site na njikọ ndị a:
Xiaomi Ezigbo 16.000 mAh maka euro 35,99
Batrị TeckNet® Mpụga 12.000 mAh maka euro 18,99
Azụ akpa iji buru ngwaọrụ na akwụkwọ gị niile
N'ezie, maka ịlaghachi ụlọ akwụkwọ, anyị agaghị efu otu ezigbo azu paaki iji buru akwụkwọ na ngwaọrụ anyị niile. Dabere na nke ọ bụla, nke a ga-enwerịrị obere akpa ma ọ bụ obere, mana tụkwasa m obi na abụla m nkịta ochie na nke a wee zụrụ gị nnukwu, ọ ka mma, nnukwu na yana akpa ndị ọzọ iji tinye ihe ị nwere, mma na ị ga-mkpa mgbe ụfọdụ n'oge ụfọdụ.
N'ezie, kwadebe ego n'ihi na ụdị akpa ndị a anaghị adịkarị ọnụ ala. Lee ụfọdụ ndị ị nwere ike ịzụta na Amazon:
Mbinye aka HP maka euro 29,99
Genda 2Archer Casual maka euro 72,99
Dị ka anyị na-ekwu mgbe niile, ndị a bụ maka anyị ngwaọrụ dị mkpa maka ịlaghachi ụlọ akwụkwọ, ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ ị nwere ike inweta na nke ahụ nwere ike bụrụ nnukwu enyemaka na nhịahụ na mgbe ụfọdụ egwu na-alaghachi na ọmụmụ ndị anyị hapụrụ n'oge ndaeyo.
Olee ụdị ngwaọrụ i chere dị mkpa iji laghachi ụlọ akwụkwọ?. You nwere ike inye anyị azịza gị nye ajụjụ a na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa 5 dị mkpa maka ịlaghachi ụlọ akwụkwọ
7 Atụmatụ na iji n'enweghị sọfụ Internet si gị ama